ငယ်ရွယ်သောအရွယ်ရောက်သူများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းနှင့် ၄ င်းတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဦး စားပေးမှုများ၊ အပြုအမူများနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုအကြားဆက်နွယ်မှုများ (၂၀၁၁) - Your Brain On Porn
YBOP comments: Labels: porn အသုံးပြုမှုပိုမိုမြင့်မားကြိမ်နှုန်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်ခဲ့နားဆင်နိုင်ပါတယ်:
ကြည့်ရှုအားပေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်အဘို့ သာ. ကြီးမြတ် preference ကို,
J ကိုလိင် Res ။ 2011 Nov-Dec;48(6):520-30. doi: 10.1080/00224499.2010.543960.
ဒီလေ့လာမှုကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးစားပေး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့ကြလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်း (SEM) ၏အဆင့်ဆင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူငယ်လူကြီးစဉ်အတွင်းအသုံးပြုနိုင်သည်ကိုမည်သို့လေ့လာ.
သင်တန်းသားများကို 782 လိင်ကွဲကောလိပ်ကျောင်းသားများကပါဝင်သည် (326 ယောက်ျားနဲ့ 456 မိန်းမတို့, M (အသက်) = ၁၉.၉) အဘယ်သူသည်အွန်လိုင်းမေးခွန်းလွှာပြီးစီးခဲ့သည်။ ရလဒ်များအရ SEM အသုံးပြုမှုနှုန်းမြင့်များနှင့်အမျိုးအစားများနှင့်အခြေအနေများမှာအမျိုးသားများအသုံးပြုမှုနှုန်းသည်အမျိုးသမီးများထက်စနစ်တကျပိုမိုမြင့်မားသည်။
Regression ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း t ကိုထုတ်ဖော်ပြသဦးထုပ်ကြည့်ရှုအားပေး SEM အမျိုးအစားများ SEM အသုံးပြုခြင်းနှင့်နံပါတ်၏ကြိမ်နှုန်းနှစ်ခုလုံးကိုထူးထူးခြားခြားပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ (အလုံးစုံနှင့်ပေါ့ပေါ့လိင်ဆက်ဆံဖက်များ၏မြင့်မားအရေအတွက်ကိုအဖြစ်ပထမဦးဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှာအနိမ့်အသက်အရွယ်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်).
ကြည့်ရှုအားပေး SEM အမျိုးအစားများ SEM အသုံးပြုခြင်းနှင့်နံပါတ်၏ကြိမ်နှုန်းနှစ်ခုလုံးကိုပုံမှန်အားဖြင့် SEM အတွက်တင်ပြလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်အမျိုးအစားများအဘို့အမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးစားပေးနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်.
ဤတွေ့ရှိချက်များအရ SEM အသုံးပြုမှုသည်ငယ်ရွယ်သောအရွယ်ရောက်သူများ၏လိင်မှုဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာကဏ္aspectsများစွာတွင်သိသာထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်နိုင်သည်ဟုဆိုသည်။